WOT ndiwo mukurumbira wako? | Martech Zone
WOT ndiwo mukurumbira wako?
Mugovera, July 9, 2011 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Zvinoshamisika kuti pakange pasisina dzimwe nhau dze kubatanidzwa kweWOT uye Facebook. WOT inomirira "Webhu yeTrust" uye inzvimbo yakavakirwa munharaunda yevashandisi vanoyera mawebhusaiti.
MunaMay, Facebook yakatanga kushandisa sevhisi sembwa yemapurisa kuchengetedza vashandisi vayo kubva pakudzvanya kusvika kunzvimbo dzakaipa. Zvinonzwika senge kufamba kwakanaka neFacebook pamusoro, asi pini dzedenga dzeWOT dzinotyisa. Pane mamwe masayiti, WOT inogona zvakare kumira kune "Webhu reTrolls". Imwe kesi mune poindi ndiwo masayiti eemail Service Provider.
ExactTarget pane WOT:
iContact pane WOT:
Mailchimp, Emailview, iContact uye ExactTarget vari 4 vakasiyana kwazvo vanopa email asi ivo vese vari kuita zvakanyanya mukushambadzira-kwakavakirwa kushambadzira, kuona kuti vatengi vavo vese vakadzidziswa pamitemo yeSSPAM, uye vese vakaita zvikwata zvekununura izvo zvinogara zvichivaka hukama neInternet Service Provider. Kana ivo vakatendera SPAM, yavo yekuendesa mwero yaizodonha uye vangadai vasiri mubhizinesi. ESP inorarama nekufema pakukwanisa kwayo kuendesa meseji kuinbox.
Handipokane kuti mamwe maemail asina kukumbirwa akagadzira chero eaya maESP… asi iniwo handina chokwadi chekuti mutengi anoona nezveSSPAM akapihwa zano kana kutobviswa kukambani. Imwe yeaya maESP ane nhungamiro yakasimba iyo kambani inofanirwa kubvuma. Panzvimbo pekubata vatengi kuzvidavirira, zvakadaro, WOT inokanganisa kune kunobva mameseji kuburikidza neIP kero uye inoshandisa kushoropodza kune ESP, zvisinei nekumira kwavo munharaunda yeemail. Sezvo WOT yakatanga senge saiti yeEuropean, masayiti muEurope akaverengerwa zvakanyanya kutsoropodza kupfuura masosi muNorth America.
Mhedzisiro yeaya mashoma ratings ndeyekuti aya masayiti dzimwe nguva anovharirwa nemasaiti, senge Facebook, kana vashandisi vadzvanya chinongedzo chekunze. Fungidzira kurasikirwa neyako Facebook traffic nekuda kwekukanganisa WOT chiyero! Ndiko kurova kwakanyanya mazuva ano.
Sezvineiwo, vamwe porn saiti ane zvirinani zvivimbo zvekuvimbika kupfuura ivo email sevhisi vanopa!
Dambudziko nderekuti vanhu vazhinji vanonzwa kuti kune huchenjeri muboka revanhu kana iripo zvechokwadi hapana humbowo hwakadaro. Vanhu vazhinji vanoumbwa nevanhu vasingazivikanwe vanoteverwa nevateveri vasingazivikanwe… uye vamwe vevanokurudzira havasi ivo chaivo nyanzvi dzenyaya pane iwo musoro wavanotara.
Mune ino chaiyo kesi, tinoona kuti WOT nharaunda… vazhinji vacho vangangodaro vasina kumbofanira kushandisa Email Service Provider… funga kuti chero munhu achisundira kunze kuwanda mavhoriyamu eemail anongove spammer. Izvo zviyero hazvizivikanwe, hazvina kunyorwa zvakanaka, uye hazvipe chero humbowo hwekuti iyo mabviro yemukurumbira nyaya ndeye Email Service Provider iri mubvunzo. Iko hakuna nzira dzekubvunza wongororo yechokwadi kana zivo ... uye hapana nzira yekumakambani anowira kuboka revanhu.
Kana isu tichizosiya yedu saiti mukurumbira kune huchenjeri hwevanhu vazhinji, ndiani ari kuve nechokwadi kuti boka revanhu rakadzidza uye vanoziva zvazviri kuita? Zvingave zvine musoro zvakanyanya kune vatengi vakasimbiswa veaya masaiti nemasevhisi kuti vakwanise kuisa mutengesi pane vasingazivikanwe zvachose vari kungotevera uchenjeri zvechaunga. Handina chokwadi WOT mhinduro yakanaka yeFacebook kana chero imwe application yekushandisa.
Ndiri kutarisira kuona masisitimu angu anokanganisa kuvimbika kwenzvimbo iyi! Ndinovimba hazvizove zvakanaka.
Tags: Facebookmbirikirokuvimbadandemutande rekuvimbakuziva
LinkedIn Mbiri uye Usage
Jul 12, 2011 na9: 01 PM
Mukurumbira wesaiti unoverengerwa kubva ku ratings, kwete makomendi. Kusiya komendi kusarudzika zvachose, uye sezvo vashandisi vasingabvumirane nemukurumbira vanowanzo nyora komendi, zvakajairika kuti makomendi aite senge anopesana nemukurumbira.
Kuzivikanwa ratings kwevatatu evane email evanopa sevhisi iwe waunotarisa mukutumira kwako kwakanaka kana kwakanyanya. Ndokumbira kuti uone iwo makadhi emakadhi:
Iyo yega ine mukurumbira mukurumbira ndeiyi:
Seizvo zita redu rinoratidza, WOT iri pamusoro pekuvimba. Kuchengetedzwa kwewebhusaiti kwewebhusaiti chinhu chakakosha pakusarudza kutendeka kwayo. Nekudaro, ichi zvakare chiri chikonzero chakakodzera kuyera saiti zvisizvo kana iwe usingavimbe nezviri mukati kana sangano kuseri kwewebhusaiti, kana mune idzi kesi, kana iwe ukatambira spam.
WOT mukurumbira ratings ndeyevashandisi 'kuzviisa pasi maonero uye ruzivo nezvewebsite' kuvimbika. Tinotenda kuti kusanganisa huwandu hwakawanda hwemaonero / zviitiko (aka Wisdom of the Crowds) neruzivo rwatinowana kubva kumatunhu edu akavimbika (phishing uye malware blacklists, nezvimwewo) zvinotipa iyo chaiyo yakajeka ruzivo nezve webhusaiti kuvimbika.
Kana iwe ukasabvumirana nechiyero, iyo inoshanda kwazvo nzira yekuita ndeyekuzviyera iwe pachako uye wedzera chirevo chinotsanangura chako chiitiko newesaiti.
Jul 14, 2011 na10: 53 PM
Ini ndinofunga zvakachengeteka kufunga kuti kana vanhu vari kutora nguva yekutaura, varikutora nzvimbo yacho. Ini handibvumirane newe maererano nekuvimba kwezviri mukati kana sangano. Ini handibvumirane newe maererano nekururama kwenzvimbo yako. Iwe unotaura SPAM, asi zvisina kukosheswa Emailvisionvision mutungamiri pasi rese mukuzvipira uye kusarudza-mukati, mvumo-based kushambadzira mameseji. Saiti yako haina kunaka.
Webtrends yaive yekutanga analytics kambani paInternet. Iwo maTroll anorovera neako saiti anotsamwa nekuda kwekutevera tekinoroji. Chinyadzo ndechekuti yako saiti inoshandisa Google Analytics - kuteedzera vashanyi.
Kudzinga iyi mhinduro uye kungopa vanhu zano kuti 'enda unotora zvimwe zviyero' hakusi kwako kune yakakomba nyaya pano. Kambani yako ine hunyanzvi hwekukanganisa zvakanyanya traffic inoenda kumabhizinesi aya - asi iwe haupi nzira dzechokwadi, dzepamutemo, dzakavimbika mabhizinesi ekutsvaga kana kubvisa kwavo kwakashata ratings.
Jul 14, 2011 na11: 41 PM
Ini ndinoda Webhu Yekuvimba, Asi ini ndakaona zvimwe chete zvinhu. Dzimwe ongororo, muchokwadi yakawanda ongororo, senge yekupfura mutumwa weimwe sevhisi nekuda kwevashandisi vasingateerere uye nekuregeredza yakajairwa mitemo nemitemo yebasa. Ndichiri kushandisa WOT, ndinongoishandisa nekeyi yemunyu.
Sep 19, 2011 pa 10: 03 AM
Tinokugamuchirai kunguva nyowani yedhijitari-kuvhima
Kana iro boka revanhu raive neruzivo, isu hatingade hurumende kuti titorere sarudzo isu tese.
Chaizvoizvo, ini handishamisike chaizvo kuti pakange pasina kuziviswa zvakanyanya nezve chibvumirano pakati peWeb Of Trust neFacebook nekuti ingadai yakafumura Webhu reTrust system kune kuongororwa kwevanhu vane ruzivo. Uye zvingadai zvisina kutora nguva yakawanda kuburitsa pachena zvakawanda zvakakanganisika zvehurongwa hwavo uye kushomeka kwekuvimbika kwematanho avo.
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve Webhu Rokuvimba, ini ndinokukoka iwe kuti uverenge zvakadzama ongororo yandakanyora: MYWOT Webhu Yekutenderera Ongororo: Yemazuva Ano Webhu Totalitarism
Inogona kunge iri nguva yekuburitsa chokwadi chinonhuwa kuseri kweMyWot…
Jan 25, 2012 pa 8: 21 AM
Doug, ndakaita bvunzo neblog rangu. Saiti yangu yaive nemazita akanaka ndisati ndaendesa kuti iongororwe. Zvino kamwe kamwe trolls akaenda kubasa uye akayera zvisina kunaka. Ini ndakanyora chinyorwa nezvazvo kuti iwe uwane chinonakidza.
Ini handina chokwadi chekuti nei Facebook yakaita chibvumirano navo. Kuyera kwavo kunogona kushandiswa uye ndakazviratidza mune yangu posvo. Ivo vari kuparadza mukurumbira wevanyatso blogger nemabhizimusi epamhepo, uye kutiza nazvo. Ivo vari kukurudzira zvisina kunaka ratings nekuti zvinovabatsira ivo kukura mushandisi base yavo. WOT inoshandisa gakava kuwana vashandisi vazhinji vatsva sezvinobvira.
Deborah anobuda uye anotaurira wese munhu kuti aongorore saiti iwe pachako, kana kuti uwane vamwe kuti vayere. Izvo ipapo zvinofumura vavariro yavo yechokwadi.
May 18, 2012 pa 10: 45 AM
Vanhu vazhinji vakashungurudzika kunze uko avo
hauzive zvekuita nezvose zvakashata muyero wangu anovapa.
Heano vamwe vari kuyedza kuita zvimwe nezvazvo -
Jun 28, 2013 pa8: 49AM
MyWOT iri kukanganisa zvakanyanya nemabhizinesi kubva chero kupi nechero ipi
mukurumbira. 90% yematanho anoita kunge akagadzirwa neboka revashandisi.
Mashoko avo anotaridzika setemplate uye kazhinji asina kunaka. Vanodaro
mitengo inoitwa zvichienderana nenhamba huru yemavhoti asi inhema chaidzo.
Vashandisi vePower vayera uremu hwakakwirira kupfuura mushandisi wenguva dzose. Saka regai
ita kuti vamwe vashandisi varipo uye vayere kusvikira isu tapihwa simba mushandisi uye Voilaaa, isu
inogona kukanganisa mukurumbira wemumwe munhu. Ah hongu, kana vakatibhadhara, tinobvisa yedu
ratings yakaipa. Bhizinesi rakanaka handiti?
Ini ndinofungidzira ma geeks anogona kugadzira mutoro wemari paMyWOT (Webhu yeSCAM).
Jul 1, 2013 na5: 31 PM
Ini ndinobvuma @spot_mark: disqus, hapana rwiyo kana chikonzero chehurongwa hwavo hwekupima.